Dadka gobollada Dhexe ee Somalia oo dib u heshiinaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dadka gobollada Dhexe ee Somalia oo dib u heshiinaya
Mudisho – Mareeg.com: Shir ay isugu yimaadeen qeybo ka mid ah dadka degan gobollada Dhexe ee Soomaaliya oo isugu jiray odayaal, aqoonyahanno, siyaasiin, ganacsato, masuuliyiinta maamullada gobollada iyo madaxda dowladda ee ka soo jeeda gobollada dhexe ayaa manta lagu qabtay Muqdisho.
Shirkaan waxaa looga haldya sidii dib u heshiisiin looga sameyn lahaa deegaannada gobollada dhexe ee Soomaaliya, halkaasoo dadka ku nool aysan horay meel wax iskula shubi wayeen.
Shirkan dib u heshiisiinta dadka degan deegaannada gobollada dhexe, ayaa waxaa ka soo qeyb-galay qaar ka mid ah waxgaradka iyo madaxda ka soo jeedda deegaannadaasi, waxaana looga arrinsanayey sidii dib u heshiisiinta loo gaarsiin lahaa dhammaad deegaannada gobollada dhexe ee Soomaaliya, si loo helo nabad waarta iyo maamul loo dhan yahay oo ay helaan dadka gobolada dhexe.
Guddoomiyaha cusub ee guddiga dib u heshiisiinta gobollada dhexe, Imaam Bashiir Salaad (Dhoolayare) oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay dhammaan dadka ka soo jeeda deegaannada gobollada dhexe in ay u diyaar garoobaan shirweyne guud oo dib u heshiisiin ah, kaas oo ka dhici doona degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, si nabadda iyo dhisidda maamul loo dhan yahay loo gaaro.
Guddoomiyaha guddiga Dib u heshiisiinta Qaranka, Ismaaciil Macallin Muuse oo isagana shirkii maanta ka qeyb-galay ayaa si weyn uga mahadceliyey dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobollada dhexe ee dalka sida ay u garteen in ay abuuraan jawi dib u heshiisiinneed oo hormuud u noqda wax wada qabsi iyo horumar, waxa uuna ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay arrintan ku daydaan.
Xildhibaan Cabdisamad Macallin Maxamuud oo ah xildhibaan ka tirsan
Barlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobollada dhexe, ayaa tilmaamay in masuuliyiinta dowladda ka tirsan ee gobolladaas ay diyaar u yihiin in ay taageeraan shirarka dib u heshiisiinneed, waxa uuna si gaar ah uga mahadceliyey guddigii qaban qaabada shirweynaha.
Shirka maanta ayaa waxaa lagu go’aamiyey in 15-ka bishan June la diro guddiga dib u heshiisiinta si ay u tagaan degmada Cadaado oo ah halka shirweynaha guud lagu qaban doono, waxaana 15-ka ilaa 30 bishan June la qaban qaabin doona shirka si loo soo gabagabeeyo dib u heshiisiinta.
Puntland oo dhireyneysa todobo magaalo
somalia:Minister of constitution: “Federal Government of Somalia is progressing in the constitutional making front